PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: October 2009
တရုတ်သံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြပွဲ (တိုကျို)
ကမ္ဘာ့ ဘာသာ စကား ရွာ ( NPO - အဖွဲ့ )မှ ကြီးမှူးကျင်...
What's Burma Army?
မင်းကိုနိူင်(သို့ မဟုတ်)ကိုပေါ်ဦးထွန်း (၄၇)နှစ်မြေ...
NCUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးမောင်မောင် နှင့် မြန်...
NCUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးမောင်မောင် နှင့် AUN-...
ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြော...
၂၀၀၉ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် (တိုကျို)
ပလောင်တို့၏ ဆင်းသက်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၈)ရက်
ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ( ပြည်ပ ဂျပန် ) ဦးဆောင်၍ ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ီးမိုကရေစီအင်အားစုများ တို့ မှ တရုတ်သံရုံးရှေ့ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ။
ရခိုင်ကမ်းလွန် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွင်းများသည် နအဖ စစ်အုပ်စု၏ တခုတည်းသော
နိူင်ငံခြားငွေကြေးကို တစုတစည်းတည်း ရရှိမည့် ၀င်ငွေတွင်းကြီး ဖြစ်သဖြင့် ထိုဝင်ငွေ
များနှင့် စစ်အင်အားတိုးချဲ စစ်လက်နက်မျိုးစုံ ၀ယ်ယူကာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ပိုမိုအမြစ်
တွယ် သက်စိုးရှည်လာမည် ဖြစ်သည့်အတွက် လာရောက်ဆန္ဒပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသမှ တရုတ်ပြည်ထိ ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းဖေါက်လုပ်မည့်
နေရာမှာလည်း သဘာ၀၀န်းကျင်နှင့် ယဉ်ကျေးမူအမွေအနှစ်များ ဆုံးရှုံးထိခိုက်ပျက်စီး
ခြင်း၊စစ်တပ်များ ပိုမိုတိုးချဲ့ တပ်စွဲလာခြင်းတို့ ကြောင့် လူ့ အခွင့်အရေး ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် 
ပိုမိုချိုးဖောက်ခံလာကြရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိူင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရပ် မပေါ်
မခြင်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို ဂျပန်နိူင်ငံရှိ တရုတ်သံရုံးကနေတဆင့် တရုတ်သမ္မတကြီးထံသို့ 
ကန့် ကွက်စာကို ပေးပို့ ခဲ့ကြပါသည်။
Photo by- Lian Khan Sum (CNC-Japan)
ကမ္ဘာ့ ဘာသာ စကား ရွာ ( NPO - အဖွဲ့ )မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲ(တိုကျို)။
တိုကျိုနိူင်ငံခြားဘာသာစကားတက္ကသိုလ်မှာ ပလောင်ဘာသာစကားနဲ့ ပါရဂူဘွဲယူမဲ့ မဒီဒီအီအူး နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့်( NHK – WORLD ) ဂျပန်ပြည်က မြကျွန်းသာ ထုတ်လွင့်မှု အစီအစဉ် ။
ကမ္ဘာ့ ဘာသာ စကား ရွာ ( NPO - အဖွဲ့ )မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ဟောပြောပွဲ
ကမ္ဘာ့ ဘာသာ စကား ရွာ ( NPO - အဖွဲ့ )နာယက Mr.Abetoshiharu ၏ အင်တာဗျုး
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာစကားတွေအများကြီးတွေထဲ မှ လူနည်းစု စကားဟာ တဖြေးဖြေး ပျောက်ကွယ် လာနေတယ်၊ အဲဒီဘာသာ စကားကိုပြောနေသူတွေလဲ သူတို့ ဘာသာ စကား ကို မပျောက်ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းဖိုအပေါ်မှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတယ်လို တွေ့ ရတယ်၊ ကမ္ဘာပေါ်က ဘာသာ စကားတွေ ပျောက်ကွယ်သွားတာဟာ တန်ဘိုးမဖြတ်နိူင်တဲ အရာတွေ
ဆုံးရုံးသွားတယ်လို့့ခံစားရတဲအတွက် တက္ကသိုလ်တွေမှာ သုတေသန လုပ်နေတဲ ပညာရှင်
တွေ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ပြီး အခုလိုပွဲ တွေ လုပ်ရတယ်လို့ 
မြန်မာနိူင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ မိမိတိုရဲ့ ဘာသာ စကားတွေကို
မပျောက်ကွယ်အောင် ထိန်းသိန်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိူင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်
( NHK – WORLD ) ရေဒီယို ထုတ်လွှင့်မှု အစီအစဉ် မှ ကူးယူတင်ဆက်သည်။
NHK Radio.mp3 -
NHK Music Upload
စင်းခံမလား တွန်းလှန်မလား (သတင်းသုံးသပ်ချက်)
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရန် လက်ခံသဘောတူထားသည့် တိုးတက်သော ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်ဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) အနေနှင့် တပ်ရင်းနှင့် တပ်သားဦးရေစာရင်းကို နအဖ စစ်ဘက်လုံခြုံရေးရာ အကြီးအကဲ ဒု- ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ထံ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးတင်ရမည်ဟု ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့ အသံ၏ သတင်းတပုဒ်တွင် ဖော်ပြသည်။
တပ်ရင်းတရင်းစီကို တပ်သားဦးရေ (၃၆၀) နှင့် ဖွဲ့စည်းပြီး နအဖစစ်တပ်မှ ဦးရေ (၃၀) ပါဝင်မည်ဟုသိရသည်။ နအဖစစ်တပ်မှပေးပို့မည့် (၃၀) ထဲတွင် တပ်ရင်းမှူးမှ တပွင့်အထိ (၁၅) ဦးနှင့် တပွင့်မှ တပ်သားအထိ (၁၅) ဦး တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ကို အကြီးဆုံး တပ်ရင်းမှူးရာထူး၌ ခန့်ထားမည်ဟုဆိုသည်။
ဒီကေဘီအေဘက်မှ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့်သူများကို အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် (၅၀) ကြား အရွယ်ရှိသူများကိုသာ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး (၅၀) ကျော်များကို ပင်စင်ပေးမည်ဟုဆိုသည်။ အမြင့်ဆုံး ရာထူးအနေနှင့်လည်း ဗိုလ်မှူးအဆင့်၌သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟုသိရသည်။
ဒီကေဘီအေနည်းတူ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရန် သဘောတူလက်ခံထားသည့် ကချင်ပြည်ဒီမိုက ရေစီသစ်တပ်မတော်(အန်ဒီအေကေ) မှ အသက် (၅၀) ကျော် ပင်စင်အပေးခံရမည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ နေထိုင်ရန် အတွက် ဒေသခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်ရှင်များထံ အလှူငွေကောက်ခံပြီး နေအိမ်များ ဆောက်လုပ်ပေးရန် နအဖမှ စီစဉ်နေကြောင်းလည်း ခေတ်ပြိုင်သတင်းတပုဒ်တွင် ဖော်ပြသည်။
ထိုသတင်းအချက်အလက်များအရဆိုလျှင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရန် လက်ခံသဘောတူခဲ့သည့် အန်ဒီအေကေနှင့် ဒီကေဘီအေအဖွဲ့တို့သည် နအဖခြယ်လှယ်သမျှကို လည်စင်းခံကြရတော့မည်ဖြစ်ပြီး ပင်စင် အပေးခံကြရမည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အနာဂတ်အရေးမှာလည်း အာမခံချက် ရေရေရာရာမရှိဘဲ နအဖစစ်အုပ်စု ၏ ပစ်စလက်ခတ် စီစဉ်နေရာချထားပေးမှုကြောင့် ရင်လေးဖွယ်အနေအထားနှင့် ကြုံတွေ့ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပေသည်။
နအဖစစ်ဗိုလ်ချုပ်များ၏ တဘက်သတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်မည့် အစီအစဉ် အပေါ်တွင် အပစ်ရပ်တို့၏ မူလတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား များစွာလျော့ပါသွားမည်ဖြစ်သလို ကြာလေလေ လုံးပါးပါး လေလေဖြစ်ပြီး နအဖစစ်တပ်မှသာ လုံးဝဥဿုံစစ်ကျွန်ပြုသွားမည့် အနေအထားကို အထင်အရှား တွေ့မြင်နေ ရပေသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန်တွင် အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များအားလုံး နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်း ရန် နအဖ၏ သတ်မှတ်ချိန် ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရန် လက် မခံသေးသည့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအနေနှင့် ဒီကေဘီအေနှင့် အန်ဒီအေကေတို့ကဲ့သို့ လည်စင်းခံကြမည်လား၊ မိမိတို့တွင်ရှိသည့် တပ်ဖွဲ့အင်အား၊ လက်နက်အင်အားနှင့် နအဖစစ်တပ်ကို တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မည်လား၊ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်မည်ဆိုလျှင်လည်း မည်သို့မည်ပုံ ခုခံတွန်းလှန်ကြမည်ဆိုသည်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံး ဖြတ်ပြင်ဆင်ထားရတော့မည့်အချိန် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေသည်။
ထိုသို့ဆုံးဖြတ်ပြင်ဆင်ရာတွင် နအဖစစ်တပ်၏ လက်ရှိအနေအထားကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုလာ သည်။ နအဖစစ်အုပ်စုက စစ်သည်အင်အား (၅) သိန်နီးပါးရှိသည်ဟု ပြောဆိုနေသော်လည်း သျှမ်းသံတော် ဆင့်၏ ရေးသားချက်အရ ၂၀၀၅ ခုနှစ် တတိယ - လေးလပတ်အစည်းအဝေးတွင် စစ်ရေးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် (ယခုနအဖ၀န်ကြီးချုပ်) က မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် တပ်ရင်းပေါင်း (၅၅၀) ရှိသည့် အနက် (၂၈၄) ရင်းမှာ တရင်းလျှင် လူအင်အား (၂၀၀) ပင်မပြည့်ကြောင်း၊ ကျန်သည့်တပ်ရင်း (၂၂၀) တွင်လည်း (၂၀၀) နှင့် (၃၀၀) ကြားသာရှိကြောင်း တင်ပြခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရ၏။ သို့သော် တပ်ရင်းတိုင်း၌ အမှန်တကယ် အင်အား (၁၅၆) ယောက် ထက်မပိုကြောင်း၊ ထိုအထဲမှ တပ်ရင်းတရင်း၏ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားမှာ (၁၂၀ - ၁၅၀) ခန့် ရှိပြီး ရှေ့တန်းသွားနိုင်သည့်အင်အားမှာ (၆၀-၈၀) ခန့်သာရှိကြောင်း အခြေအနေမှန်အတိုင်း တင်ပြခဲ့ဖူးသည် ဆို၏။
ထိုတင်ပြချက်အရဆိုလျှင် စစ်သည်အင်အား (၅) သိန်းနီးပါးရှိသည်ဆိုသည့် နအဖတပ်ရင်းများမှ စုစုပေါင်း ရှေ့တန်းထွက်နိုင်သည့် အင်အားမှာ (၅၀၀၀၀) ၀န်းကျင်ခန့်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ ထို့အပြင် နအဖ စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်သည့် တပ်သားအများစုမှာလည်း ယုံကြည်ချက်စိတ်ဓာတ်အရင်းခံနှင့် ၀င်ရောက်ကြ ခြင်းမဟုတ်ဘဲ အတင်းအကျပ် တပ်သားစုဆောင်းခံရမှုနှင့် ၀မ်းရေးအဆင်မပြေဖြစ်၍ ၀င်ကြရသော တပ်သား များနှင့် ကလေးစစ်သားများက အများစုဖြစ်နေသည့်အတွက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ပျက်ပြားနေသည့် စစ်တပ်အ နေအထားဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ သို့သော် လက်နက်အင်အားတွင်မူ နအဖစစ်တပ်က တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များ အားလုံးထက် သာလွန်သည့်အတွက် လက်နက်အင်အားကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်မည်ကို တော့ သံသယရှိစရာလိုမည်မဟုတ်ပေ။
အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ချင်းအနေနှင့် အမှန်တကယ် ရှေ့တန်းထွက်နိုင်သည့် စစ်သည်အင်အားတွင် နအဖစစ် တပ်မှ ရှေ့တန်းထွက်နိုင်သည့် စုစုပေါင်းအင်အား (၅၀၀၀၀) ၀န်းကျင်ထက်မပိုနိုင်သော်လည်း နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့အသွင်ပြောင်းရန် လက်မခံသေးသည့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတပ်မတော် (SSA-N)၊ ဝပြည် သွေးစည်းညီ ညွတ်ရေးတပ်မတော် (UWSA)၊ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (NDAA – ESS) မိုင်းလား အဖွဲ့၊ ကချင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအားလုံးစု ပေါင်းလျှင်မူ တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားမှာ နအဖနှင့် သူမသာကိုယ်မသာ အနေအထားတွင် ရှိနိုင်သည်ကို ကိန်းဂ ဏန်းများအရ သိရပေသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များ၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ခိုင်ကြည်မှုအနေအ ထားက နအဖတပ်သားများထက် များစွာသာလွန်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရပေသည်။
ထို့ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ရေးရာပျက်ပြားပြီး လက်နက်အင်အားသာလွန်သည့် နအဖစစ်တပ်၏ ဗိုလ်ကျတိုက်ခိုက် မှုကို စိတ်ဓာတ်ရေးရာ သာလွန်သည့် အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့များက အစွမ်းကုန် စုပေါင်းတွန်းလှန်ခြင်းဖြင့် အောင်ပွဲရ ယူနိုင်သည့် အနေအထားရှိသည်ကိုတွေ့ရပေသည်။ ခုခံတွန်းလှန်မည့် နည်းဗျူဟာကောင်းမွန်ရန်နှင့် ညီညွတ် မှုအင်အားက များစွာအရေးပါနေပေသည်။ ထို့အပြင် အပစ်မရပ်သေးသည့် ကေအန်ယူနှင့် SSA-S ကဲ့သို့ သော တပ်ဖွဲ့များနှင့်လည်း မဟာမိတ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ အန်ဒီအေကေ၊ ဒီကေဘီအေတို့ကဲ့သို့ လည်စင်းခံလျှင် ရာသက်ပန် နအဖစစ်ကျွန်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သလို စုပေါင်းတွန်းလှန်ခြင်းမရှိဘဲ တဖွဲ့ချင်းခုခံတိုက်ခိုက်နေပါက ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကဲ့သို့ နအဖစစ်တပ်၏ အလွယ်တကူ ၀ါမျိုးခြင်းကို ခံရပြီး တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ အလွယ်တကူ ခြေမှုန်းခံရသွားရနိုင်သည်ကို သတိချပ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုသို့ ရှေ့တိုးတံပိုး နောက်ဆုတ်လှည်းတုတ် ဖြစ်နေသည့်အနေအထားတွင် လည်စင်းခံခြင်းထက် စုပေါင်းတွန်းလှန်ခြင်းကသာ ရာသက်ပန်စစ်ကျွန်အပြုခံရမည့် အန္တရာယ်မှလွတ်မြောက် နိုင်ပြီး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိုင်မည့် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအ တွက်လည်း တဘက်တလမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပေသည်။
Nothing Can Run Quicker than Your Mind.
မင်းကိုနိူင်(သို့ မဟုတ်)ကိုပေါ်ဦးထွန်း (၄၇)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အခမ်းအနား (တိုကျို)
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၈)ရက်
ကျမ္မာပြီး သက်တော်ရာကျော်ရှည်စေကြောင်းနှင့် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်စေကြောင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မင်းကိုနိူင်၏ မွေးနေ့ ပွဲ အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိူင်ငံ တိုကျိုမြို့ မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မွေးနေ့ ပွဲ အခမ်းအနားမှာ မင်းကိုနိူင်၏ မိသားစုဝင် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ တစ်ဦးမှ ပွဲစီစဉ်ကျင်းပသူများနှင့် တက်ရောက်လာကြသည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး မင်းကိုနိူင်၏ ငယ်စဉ်ဘ၀မှ ယနေ့ ချိန်အထိ ဖြတ်သန်းလာခဲ့သည့် နိူင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကို တင်ပြခဲ့ပါသည်။တက်ရောက်လာကြသည့် အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားများပြောကြားပြီး ကဗျာရွတ်ဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်များ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ မင်းကိုနိူင်၏ အတ္ထုပတ္တိ နှင့်
နိူင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအကျဉ်းချုပ် စာအုပ်ကို ဗမာနိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်(နိူင်ငံခြားရေးကော်မတီ)မှ အခမဲ့ဖြန့် ဝေပေးခဲ့ပါသည်။
Photo by - Lian Khan Sum(CNC-Japan)
NCUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးမောင်မောင် နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ တွေ့ ဆုံပွဲအခမ်းအနား
NCUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးး ဦးမောင်မောင် သည် (၁၄ . ၁၀ . ၂၀၀၉ )ရက်နေ့ဂျပန်နိူင်ငံ ဒုတိယ နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့် တွေ့ ဆုံပြီးသည့်နောက် ဂျပန်နိူင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေကြသော အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ခံများနှင့် ထပ်မှန် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို ဂျပန်နိူင်ငံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် Rengo ၏ ရုံးခန်း တွင် ထပ်မှန်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယ နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သွားရောက်တွေ့ ဆုံရာတွင် ဂျပန်နိူင်ငံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ် Rengo ၏ မိတ်ဆက် အကူအညီပေး ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သွားရောက်တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး တပ်ပေါင်းစု(ရ)ဖွဲ့ ကိုယ်စား တပ်ပေါင်းစု(ရ)ဖွဲ့ ၏တင်ပြချက်များကို ဂျပန်ဒုတိယ နိူင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား တင်ပြနိူင်ခဲ့ပါသည်။
ဂျပန်နိူင်ငံတွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဆက်လက်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားကြမည့်
အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးမှ တာဝန်ခံများနှင့်ရှေ့ လုပ်ဆောင်သွားကြရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးအခမ်းအနားကို ညနေ ၁၅း၀၀ နာရီ တွင်
စတင်ကျင်းပပြီး ညနေ ၁ရး၀၀ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။
NCUB အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဦးမောင်မောင် နှင့် AUN-Japan တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား(တိုကျို)
၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၁၁)ရက်
ဂျပန်နိူင်ငံသို့ခေတ္တရောက်ရှိလာသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိူင်ငံ အမျိုးသားကောင်စီ (NCUB) ၊ မြန်မာနိူင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ ချုပ်( FTUB ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင် နှင့် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ အစည်း(ဂျပန်) တွေ့ ဆုံပြီး နိူင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို ညနေ ၁၈း၀၀ နာရီ မှ ၂၁း၀၀နာရီအထိ Takadanobaba မြို့ နယ် AUN-Japan ၏ ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို AUN-Japan ၏ အဖွဲ့ ဝင်အသီးသီးမှ မူဝါဒရေးရာကော်မတီဝင်များ၊ AUN-Japan ၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ ၀င်များ နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြည်တွင်းပြည်ပ နိူင်ငံရေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား တရပ် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲ
မတရားဖမ်းဆီး အကျဉ်းချထားသည့် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုချီတက် ဆန္ဒပြပွဲ အခမ်းအနားဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း(တိုကျို)
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ( Ko Pwar)
၂၀၀၉ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်ပွဲတော် ( ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ )
သတင်းဓါတ်ပုံ( ဒီမိုဝေယံ )...
မနုဿပညာရှင်တို့က မွန်၊ ၀၊ ပလောင် လူမျိုးတို့သည် ‘မွန်-ခမာ‘ အနွယ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ မြေပေါ်တို့ အဦးစောဆုံး ၀င်ရောက် လာကြသည်ဟု လက်ခံကြပါသည်။ မွန်-ခမာအနွယ်သည် ‘မောင်းဂုတ်‘ လူမျိုးနွယ်ကြီးမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆိုသည်။ မောင်းဂုတ် လူမျိုးနွယ်ကြီးမှ ‘သြစတြစ်‘ နှင့် ‘တီဗက်တိုတရုတ်‘ ဟု ကွဲပြားလေသည်။ ၄င်းတို့သည် မောင်းဂုတ် အနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြသော်လည်း ဒေသတခုအတွင်း နေထိုင်ကြရာမှ လူဦးရေ တိုးတက် များပြားလာခြင်းကြောင့် မိမိတို့၏ အသက်ရှင် နေနိုင်ရေးအတွက် နေရာဒေသတခုမှ အခြားတခုသို့ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကို ရှာဖွေနေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြသည်။ ဤသို့အချိန်ကာလ ကြာညောင်းလာသောအခါ နေထိုင်ရာနေရာဒေသတို့လည်း တခုနှင့် တခု မတူညီသောကြောင့် သြစတြစ်နှင့် တိဗက်တရုတ်ဟူ၍ ကွဲပြားကြခြင်းဖြစ်၏။ ၄င်း မောင်းဂုတ်လူမျိုးတို့သည် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာရှာကြံ၍ နယ်မြေဒသတခုမှ တခြားတခုသို့ ပြောင်းရွေ့နေကြရာတွင် နေကရွိုတ်လူမျိုးနှင့် အထူးသဖြင့် ပရိုတိုသြစလွိုက်လူမျိုးများနှင့် သွေးနှော်ကြသည်ဟု ဆို၏။ ထိုကြောင့် သြစတြစ် လူမျိုးတို့သည် သြစတြိုနီးရှန်နှင့် သြစတြိုအေရှတစ် ဟူ၍ ယင်းတို့၏ သာသာစကားဖြင့် ခွဲခြားခြင်းဟုဆိုသည်။ သြစတြိုအေရှတစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ (အာသံ၊ မဏိပူရ) ရှိခါဆီလူမျိုး။ မုဏ္ဍလူမျိုး (ကိုလ်)၊ ဆန်သာလ်လူမျိုး၊ နာဂဗာရီကျွန်းရှိ နာဂဗာရီလူမျိုးနှင့် အာသံ၊ မြန်မာ၊ အင်ဒိုချိုင်းနားရှိ မွန်ခမာအနွယ်ရှိတို့ ပြောဆိုသော စကားပါဝင်သည်။
(မောင်းဂုတ်) မွန်ဂိုလွိုလ် လူမျိုးနွယ်ကြီး၏ မူရင်းဒေသမှ အာရှတိုက်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပြီး အထူးသဖြင့် အရှတိုင်မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းနှင့် အရှေ့ တောင်ပိုင်းတို့၌ ပြန်နှံ့နေထိုင်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ဗီယက်နမ်၊ ခမာ၊ မွန်၊ ၀၊ ပလောင်(ရိအာန်) မုဏ္ဍ၊ ဆန်သာလ်၊ ခါဆီစသော လူမျိုးတို့သည် မွန်ခမာအနွယ်မှ ပေါက်ဖွားလာသော အလွန်သွေးနီးစပ်ကြသည် ညီရင်းအစ်ကို မောင်နှမရင်း သားချင်းဟုဆိုရပေမည်။
ထိုနည်းတူ မောင်းဂုတ် (မွန်ရိုလွိုက်လူမျိုးနွယ်ကြီး) မှ တီဗက်တိုဘားမင်း အုပ်စုတွင် ပျု၊ ကမ်းယံ၊ သက်၊ ချင်း၊ ကချင်း၊ ဗမာ၊ ကရင်လူမျိုးဖြစ်သို့လည်းကောင်း ထိုင်းတရုတ်အုပ်စုမှ ရှမ်း၊ ရှမ်းတရုတ်၊ တရုတ် လူမျိုး အဖြစ်သို့လည်းကောင်း ဆင်းသက် လာကြသည်ဟုဆို၏။
သြစတြိုအေရှတစ် အရှတောင်ပိုင်းသို့ မဆင်းသက်မီ တရုတ်ပြည်ယန်စီ ကန်မြစ်ဝှမ်း ဒေသတွင် မွန်ခမာ လူမျိုးနွယ်အဖြစ် တခုတရုံးတည်း အခြေချ နေထိုင်လာကြ သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုကြောင့် ယန်စီကျန်မြစ်ဝှမ်းဒေသသည် မွန်ခမာတို့၏ ဒေသဟောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ၄င်းမြစ်ဝှမ်း ဒေသသည် ရာသီဥတု သင့်တင့် မျှတမှုရှိပြီး မြေဆီသြဇာ ကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိုင်သော လူမျိုးဟု ယူဆရသည်။ နှစ်ပေါင်း ရှည်ကြာစွာ တစုတရုံးတည်း စနစ်တကျ အခြေချနေထိုင်ကြရာတွင် စိုက်ပျိုးရေး ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကြီးဖြင့် စနစ်ကျသော လူအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းကြကာ ကျေးပြည်၊ ကျေးနယ် ထူထောင်ကြသည်။ ၄င်း၌ မိမိတို့လူမျိုးများ၏ လူဦးရေများပြား လာခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း အာရှမြောက်ပိုင်းဒေသ၌ ရာသီဥတုဆိုးဝါးမှု ကြောင့်လည်းကောင်း မြောက်ပိုင်း လူမျိုးနွယ်စုများ အစုအပြုံ တိုးဝင်ဆင်းသက် လာခြင်း ကြောင့်လည်းကောင်း အကျပ် အတည်းနှင့် တွေ့ရသောကြောင့် တောင်ဖက်ပိုင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြရသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ပြောင်းရွှေ့ကြရာတွင် အင်ဒိုချိုင်းနားဘက်သို့ ဗက်ယက်နမ်ဒေသတွင် ဗီယက်နမ်လူမျိုး၊ ကမ္ဘောဒီးယား ဒေသတွင် ခမာလူမျိုး၊ ယိုးဒယားနှင့် မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်းဒေသတွင် မွန်၊ ၀၊ ပလောင်အုပ်စုတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မပုတ္တရ မြစ်ကြောင်းအတိုင်း အိန္ဒိယြ့ပည် ဒက္ခီဏ ကုန်းဒေသတွင် မုဏ္ဍလူမျိုး၊ ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ဆန်သာလ်လူမျိုးနှင့် အာသံနယ်တွင် ခါဆီလူမျိုးတို့ကိုလည်းကောင်း အခြေချနေထိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
မွန်ခမာအနွယ်ဘွား လူမျိုးတို့သည် ဘာသာစကားတမျိုးတည်ဖြစ်သော်လည်း အခြား ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်အခြေချပြီး ကာလကြာမြင့်စွာခွဲခွါကြခြင်း၊ မူရင်းဘာသာ စကားအပြင် ဝေါဟာရအသစ်များ တိုးတက်များပြားသုံးစွဲ၍ မိမိတို့အနွယ်နှင့် မတူသော ဝေါဟာရများ ထည့်သွင်းပြောဆိုခြင်းရှိသော်လည်း မူလ မွန်ခမာဝေါဟာရကို သုံးစွဲလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တို့က လူမျိုးများ ဆင်းသက်လာပုံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၀၀၀)ခန့်ကပင် မွန်ခမာအနွယ်ဝင် မွန်၊ ၀၊ ပလောင် (ရိအာန်)လူမျိုးတို့သည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ‘ ယန်စီကျန်မြစ်ဝှမ်းဒေသ‘ ဆီမှာ တောင်ဖက် သို့ ဆင်းသက်လာကြပြီးလျှင် သံလွင်မြစ်ကြောင်းနှင့် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဆီသို့ ဆင်းသက်ကြပြီး တိုင်းပြည်တောင်ပိုင်းမဲနမ်မြစ်ဝှမ်း၌ မွန်လူမျိုးစုဦးဆောင်၍ ဒွါရာဝတီပြည်ကို ထူထောင်ကြ သည်။ မွန်၊ ၀၊ ပလောင်အနွယ်ဘွား လူမျိုးတို့ကို ယောနက (ယူနန်) ယောန၊ ယောန်း(ယွန်း)၊ ကြောမ်း (ကြွမ်း) ဟု ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါသည်။ ‘ပလောင‘် တောတိုး ‘ယောလူမျိုး‘ ဟု အဆိုစာရှိလေရာ ယောနတိုင်း (ယူနန်ဒေသ)က ဆင်းသက်စီးပွားလာသော လူမျိုးဟုဆိုသည်။ ပလောင်တို့သည် မွန်တို့နှင့်အတူ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသ၊ သထုံဒေသ၊ ပဲခူး-တော်ငူဒေသတို့တွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ပလောင်လူမျိုးနွယ်စုတခုဖြစ်သည့် (ရူမိုင်း)တို့ အခြေချကြောင်း ရမ္မ၀တီဟုအည်တွင်ကြောင်း သရေခေတ္တရာ (ပြည်)ပန်းတောင်းအရပ် ဒေသသို့ ပြောင်းရွှေ့လာကြကြောင်း၊ ရူမိုင်း (ရူမာည်း) ရှေ့ဟောင်းရာဇ၀င်တွင်ရှိပါသည်။ ကျန်အစုမှာ တောင်ငူ-ရမည်သင်းဒေသမှ ရှမ်းပြည်တောင်းပိုင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ၀၊ ပလောင်အုပ်စုတစုသည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်းဆီမှ မြန်မာပြည်သို့ ရွှေလီမြစ်ကြောင်းနှင့် တပိန်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းတကာင်းဒေသ၊ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဒေသဖြစ်သည့် ရှေ့ပုဂံ(ပေါက္ကံ) ဒေသ။ မင်းဘူး (၆)ခရိုင်ဒေသ၊ ပခုက္ကူ (ယောနယ်)ဒေသ ဗိသာနိုးဒေသတို့၌ ၀၊ ပလောင်လူမျိုးအနွယ်တစုတို့သည် ဧရာဝတီမြစ် ကြောင်းအတိုင်း ဆင်းသက်လာပြီး အခြေချခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နောက်တွင်ကား မရှေးမနှောင်းပင် ရောက်ရှိလာကြသော ရှေးပျူနှင့်အနွယ်တူလူမျိုးများတို့ ရောနှောအခြေချ ကြကြောင်း သိရှိရ၏။ နောက်တွင် ပုဂံပြည်ကြီးကိုထူထောင်ကြရာတွင် မွန်၊ ၀၊ ပလောင် အနွယ်လူမျိုးမှာ ပါဝင်ကြောင်း ပုဂံကျောက်စာအရ သိရကြောင်း သိရပါ၏။
ပလောင်လူမျိုးတို့သည် ရှေးဦးပျူလူမျိုးတို့နှင့် နီးကပ်စွာအတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ၊ ရှေးဟောင်းယုံကြည်မှု၊ ရိုးရာပုံပြင်များ။ မျိုးရိုးစဉ်လာခံယူမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို တူညီစွာ ခံယူကျင့် သုံးလာခဲ့၍လည်း ပျူလူမျိုးမှ “ပြူ” “ ပလူ” ၎င်းမှ ပလောင် လူမျိုးဟု အဆိုရှိလေသည်။ ပလောင်၊ ၀ နွယ်တူလူမျိုးတစ်စုတို့သည် တကောင်း ဒေသဆီမှ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း ဆင်းသက်လာကြပြီး မြေပြန့်ဒေသဖြစ်သည့် မတ္တရာ၊ အောင်ပင်လယ် (မန္တလေး) အင်းဝ၊ တောင်ပြုန်း၊ ကျောက်ဆည်ဒေသသို့ ပြန့်နှံ့အခြေချလာပြီး မွန်ခမာအနွယ် မွန်၊ ၀၊ ပလောင်တို့နှင့် ပြန်ဆုံစည်းကြ၍ ကျောက်ဆည် (၁၁)ခရိုင်ဒေသတွင် အင်အားကြီးထွားပြန့်နှံ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ပန်းလောင်မြစ်၊ ဇော်ဂျီမြစ်ဒေ သတို့တွင် ပြန့်နှံ့စွာ အခြေချနေထိုင်သည်ကို သိရှိရ၏။ ထို့ကြောင့် ၀၊ ပလောင်လူမျိုးများ (ရှေးဦး ၀၊ ပလောင်) တို့သည် မြေပြန့်ဒေသများတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း မွန်ဂိုတာတာ လူမျိုးအုပ်စုတို့နှင့် မကြာခဏ တိုက်ခိုက် ကြရကြောင်း ရန်သူတို၏ နှောက်ယှက် တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ကြရကြောင်း၊ မြန်မာအုပ်စုဝင်တို့ အလုံးအရင်း အင်အားကြီးစွာ ၀င်ရောက်လာကြကြောင်း၊ မွန်ဂိုတာတာနှင့်အတူ မြန်မာအုပ်စုဝင် အနွယ်တို့၏ တိုက်ခိုက်ခြင်း ကြောင်း မွန်ခမာအနွယ်ဝင် မွန်၊ ၀၊ ပလောင် လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြိုကွဲ၍ မွန်အုပ်စုတို့ မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်း ဒေသတို့၌ အခြေ တည်ကြကြောင်း၊ ၀၊ ပလောင်အုပ်စုအနွယ်တို့ ရှမ်းကုန်းပြင် မြင့်(တောင်ပေါ်ဒေသ) ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းတို့ ၀င်ရောက် အခြေချကြကြောင်း သိရှိရ၏။
မွန်ခမာအနွယ်ဝင် ၀၊ ပလောင်လူမျိုးတို့သည် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း ယန်ဆီကျန် မြစ်ဝှမ်းဒေသမှ တစ်စုအဖြစ် ထွက်လာကြပြီး တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း (တာလီဒေသ) ထန်ချုန်းဒေသနှင့် ယုန်ချန်ဒေသတို့တွင် အခြေချ၍ မြို့ပြပြည်နယ်ငယ်များ ထူထောင်ကြ သည်။ မွန်ဂိုတရုတ်အနွယ်တို့၏ အဆက်မပြတ် နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မှု ဒဏ်ကြောင့် “ တာလီဖူးနိုင်ငံတော်(ကောသမ္ဘီပြည်) “ ပျက်ဆီးခဲ့ရသဖြင့်် “ ၀ ” အနွယ်ဝင်သည် သံလွင်မြစ် ကြောင်းအတိုင်း ဆင်းသက်ကြပြီး မြန်မာပြည်သံလွင်အရှေ့ခြမ်းဒေသနှင့် အနောက်ခြမ်းဒေ တွင်အခြေချ နေထိုင်ကြကြောင်း တွေ့ရ၏။
တာလီဖူးမြို့ပြနိုင်ငံတော် (ကောသမ္ဘီပြည်) ပြိုကွဲခဲ့ရခြင်းကြောင့် ၀ နှင့် ပလောင်အနွယ်စု ကွဲထွက်ခဲ့ရပြီး ပလောင်အနွယ်စုမှာ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းနှင့် သံလွင်မြစ်အကြား တောင်တန်းကြီး များကို ဖြတ်ကျော်၍ မုံးကိုး - ကြူကုတ်လမ်းကြောင်းမှ ကွက်ခိုင်၊ သိန္နီ၊ လားရှုိုး - မိုင်းရယ်သို့ ၀င်ရောက်လာကြသည်။ AD ၁၀ရာစုတွင် ပလောင်အနွယ်စုတစ်ခုမှာ ရွှေလီမြစ်ကြောင်းအနီး ကျယ်လန့် (နမ့်ခမ်း - မူဆယ်) တွင် ပြန်လည်စုစည်းကြပြီး မြို့ပြကျေးပြည် (ဒုတိယ ကောသမ္ဘီပြည်) အဖြစ် ထူထောင်ကြပြန်သည်။ ထို့နောက်တွင် “ ကျယ်လန့်ကျေးပြည်ထွန်း ကားစဉ်တွင် ပဲခူး - တောင်ငူ - ကျောက်ဆည် ဒေသတို့မှ အင်အားပြိုကွဲလာသည့် မွန်၊ ၀၊ ပလောင်အနွယ်စုအနက်မှ ပလောင်အနွယ်စုသည် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းသို့ ဆန်တက်လာ ကြပြီး ရွှေလီချိုင့်ဝှမ်းဒေသရှိ အနွယ်စုတို့နှင့် ပူးပေါင်း၍ တောင်ပေါ်ဒေသ၌ မြို့ ပြကျေးပြည်စုစည်း တည်ထောင်ကြပြန်သည်။ ရာမ၀တီဟုပင် အမည်တွင်၍ မြို့တော်ကို “ကျကောင်း” (မိန်းကောင်း)ဖြစ်သည်။ ခရိုင် (၂၉)ခုဖွဲ့စည်း ထားကြောင်းနှင့် ပလောင် မျိုးနွယ်စုများဖြစ်ကြသည်။ (ရူမည်း၊ ရူလျဲန်း၊ ရူကော) တို့၏ မြို့ပြကျေးပြည်ဖြစ်ပြီး စည်ပင် ထွန်းကားခဲ့၏။ တောင်ပေါ်ကုန်းမြင့်၌ တည်ထားခြင်းကြောင့် ရန်အန္တရာယ်များကို ခုခံနိုင် ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် ရန်သူ၏ တိုက်ခိုက်မှု မလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ဟန် ရှိသည်ဟုရှိသည်။
Posted by PNSjapan at 5:28 PM0comments
Labels: ကျွှန်တော်တို့အကြောင်း, မှတ်တမ်း
ပလောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် အမျိုးသားတော်လှန်ရေး ပေါ်ပေါက်လာပုံ နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အပြီး မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် တိုင်းရင်းသားများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တည်ဆောက် နိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ရှမ်းပြည် စော်ဘွားများကောင်စီ ဥက္ကဌ ပလောင်အမျိုးသား တောင်ပိုင် စော်ဘွား ကြီးစ၀်ခွန်ပန်စိန်က တောင်တန်းနယ် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်အဖြစ် စွမ်းစွမ်းတမံ ဦးဆောင် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း အချုပ်အချာအဏာပိုင် လွတ်လပ်သော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပေါ်ထွန်းရေးတွင် သမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်ကို တောင်တန်းသားများ၏ ဦးစီး ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပလောင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး တောင်ပိုင် (ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့)စော်ဘွားကြီး စ၀်ခွန်ပန်စိန်၏ ဦးစီးဦးဆောင်မှုဖြင့် သမိုင်းဝင် လက်မှတ် ရေးထိုး နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တို့ ကျဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးကာလတွင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု သည်လည်း ပြိုကွဲသွားရလေသည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ် မတ်လ ၂ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲမည့် အန္တရယ်မှ ကင်တင်ရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်းစစ်အုပ်က နိုင်ငံတော် အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်နယ်များ၊ လူမျိုးစု အမျိုးသားများ တောင်းဆိုသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေး၊ တန်းတူညီမျှသော အခြေခံလူအခွင့် အရေး ရရှိရေးနှင့် အာမခံချက်ရရှိရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးတို့ကို လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးကြရလေသည်။
ဤသို့သော မြန်မာနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ကြောင့် မိမိတို့၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး၊ မိမိတို့၏ အမျိုးသား အသုံးချခံဘ၀သို့ မကျရောက်ရေး၊ တန်းတူညီမျှသော အခြေခံ လူအခွင့်အရေးရရှိရေး၊ မိမိတို့၏ အမျိုးသားတစ်ရပ်လုံးကို ဦးဆောင်နိုင်မည့် အဖွဲ့အစည်းတရပ် ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ရေး ဟူသော ဦးတည်ချက်ဖြင့် ရှမ်းပြည်တော်လှန်းရေး ခေါင်းဆောင် တို့က ပလောင် အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ Palaung National Force/ PNF ၁၉၆၃ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၂ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ပလောင် အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ကို တောင်ပိုင်စော်ဘွားကြီး၏ မျိုးနွယ်ဖြစ်သော စ၀်ခွန် အေးနှင့် စ၀်ခွန်လီတို့ကဦးဆောင်၍ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မြို့သစ်၌ တပ်ရင်း ဌာနချုပ် ကို ဖွင့်လှစ်ထားရှိခဲ့သည်။ စစ်ဒေသအဖြစ် ကျောက်မဲ၊ နောင်ချို၊ မိုးကုတ်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်းမြိ့တို့ကို အခြေခံထားရှိကာ စစ်ရေး၊ စည်းရုံးရေးကို အခိုင်အမာ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအတူ ပလောင်အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်းကို နမ့်ခမ်းမြို့နယ်ဖွား ပလောင်မျိုးနွယ်ဝင် စ၀်ခွန်သောင် ဦးဆောင် ကွက်ကဲပြီး မန်ဘွန်ရွာ (ယခင် နမ္မတူ) ဟိုမိန် (နမ့်ဆန်) တွင် တပ်ရင်းဌာနချုပ် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသည်။ နမ္မတူ၊ မန်တုန်၊ နမ့်ခမ်းနှင့်ကွတ်ခိုင် အနောက်ခြမ်း ဒေသတို့ကို အခြေခံ စစ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ထားရှိသည်။
၁၉၇၆ခုနှစ်တွင် ပလောင်အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်းကို ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တာခွန်သောင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဆောင်မှု အောက်တွင် ပလောင်အမျိုးသား များအတွက် တော်လှန်သော စိတ်ဓါတ်ကို များစွာစည်းရုံး လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပြီး ပလောင် အမျိုးသားများ၏ ခိုင်မာသော စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လမ်းစဉ်များကို မှန်ကန်စွာ ချမှတ် ကျင့်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ် တွင် တာခွန်သောင် မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် ကွယ်လွန် ကျဆုံးသွားပြီးနောက် မိုင်းသံလွင်မှ ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်း တာကျော်လှမှ ဥက္ကဌအဖ်ြစလည်းကောင်း ယခုလက်ရှိ တာအိုက်မုန်းမှ ဥက္ကဌ အဖြစ်လည်းကောင်း ဆက်လက်ဦးဆောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ ကြပါသည်။
ပလောင်လူမျိုးတို့သည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ မန်တုန်မြို့နယ်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ် အနောက်ဖက်ခြမ်း၊ သီပေါမြို့နယ် အနောက်ဖက်ခြမ်း၊ မိုးကုတ်မြို့နယ် မိုးမိတ်မြို့နယ်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မိုးမိတ်မြို့နယ်၊ လားရှိုးနယ် အနောက်ခြမ်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်နှင့် မူဆယ်မြို့နယ်အနောက် ခြမ်းတွင် နေထိုင်ကြပါသည်၊ ၁၉၉၁ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပလောင်လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့နှင့် နအဖစစ်အုပ်စုတို့အပစ်ခတ်ရပ်စဲပြီးနောက် ယင်းပလောင် လူမျိုးများ နေထိုင်သောဒေသများကို ပလောင်ဒေသအထူး (၇)အဖြစ်သတ်မှတ် ကာ ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်က အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး (၁၄)နှစ်အကြာ ၂၀၀၅ခုနှစ် ဧပြီ ၂၉ရက်နေ့တွင် နအဖစစ်အုပ်မှ အင်အားသုံးကာ ရုတ်တရက် ၀ိုင်းရံ ပိတ်ဆို့ခံမှုကြောင်းက ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်ရေးတပ်မတော်က လက်နက် အပ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရပါသည်။ ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ နအဖစစ်အုပ်စုထံ လက်နက် အပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပလောင်ဒေသ အုပ်ချုပ်မှုများကိုပါ အားလုံးဖျက်သိမ်း လိုက်ရသဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ပလောင်ဒေသအတွင်းသို့ နအဖ၏ စစ်တပ်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့များ၊ နအဖ ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည့်သူစစ်များ၊ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲများ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့များဝင်ရောက်လာကာ ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖိနှိပ်ကာ စစ်အာဏာရှင်စိုးမိုးရေးကို ဖော်ဆောင်လာကြသည်။ ပလောင်ဒေသတွင် ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် အမည် လုံးဝမသုံးတော့ဘဲ ပလောင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ဟူ၍သာ ရပ်တည်နေရသည်။ ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်သည် လက်နက်အပ်ပြီး နောက်ပိုင်း ပလောင်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီနှင့် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး ကော်မတီအဖြစ်သာ ဆက်လက် လှုပ်ရှားရန် နအဖမှ ခွင့်ပြုထားပါသည်။
ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်သည် လက်နက်အပ်ပြီးနောက် ပိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပလောင်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီသည်လည်း ယခုအချိန်ထိ လူထုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ tစတင်မ လုပ်ဆောင်နိုင်သေးသည့်အပြင် ယခင် လက်နက်မအပ်စဉ်က ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများပင် များစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံး လျက်ရှိသည်။ နအဖ ပေးအပ်သော လယ်ထွန်းစက်များ၊ လမ်းဖောက်စက်များ အစရှိသည်တို့မှာလည်း ယင်းတို့သုံးပြီးသော စက်အဟောင်းများကို ဆေးပြန် သုတ်ထားခြင်းဖြစ်၍ မည်သည့် လုပ်ငန်းမျှ စတင်အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးချေ။
နအဖစစ်အုပ်စုတို့သည် ပလောင်ဒေသအတွင်းရှိ အဏာမက်မောကာ မျိုးချစ်စိတ်ပျောက်နေသူများကို ပလောင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် စိတ်ဝမ်း ကွဲစေရန် ရာထူးစည်းစိမ်း လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အမျိုးမျိုးပေးကာ စည်းရုံးလျက် ရှိသည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးခွန်ပွင့်နှင့်ဆွေမျိုးများကို ပလောင်မြို့နယ် အာဏာပိုင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရာထူးများခန့်အပ်ကာ ပလောင်ပြည်သူလူထုများကို ကြံ့ခိုင်ရေးအဖွဲ့၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်လာစေရန်နှင့် နအဖ တပ်တွင် အတင်းအဓမ္မ စစ်မှုထမ်း စေခိုင်းခြင်းများ စနစ်တကျ ကျူးလွန်ပြု လုပ်လျက်ရှိသည်။
Posted by PNSjapan at 4:14 PM0comments